ယူနိုက်တက် ကစားသမား တစ်ဦးကို အပြင်းထန်ဆုံး ဝေဖန်လိုက်ပြီး ဆိုးလ်ရှားဖက်မှ ကာကွယ်လိုက်တဲ့ ပေါလ် စခိုးလ် - xyznews.co
ယူနိုက်တက် ကစားသမား တစ်ဦးကို အပြင်းထန်ဆုံး ဝေဖန်လိုက်ပြီး ဆိုးလ်ရှားဖက်မှ ကာကွယ်လိုက်တဲ့ ပေါလ် စခိုးလ်
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ မ​နေ့ညကတော့ အိုးလ်ထရပ်ဖို့ဒ် ကွင်းကြီးထဲမှာ ခါးသီးပြိုင်ဖက် လီဗာပူး အသင်းကို ဧည့်ခံကစားခဲ့ပြီး ပထမပိုင်းမှာတင် လျော့တိလျော့ရဲ ကစားဟန်ကြောင့်4–0ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ စိတ်ပျက်ဖွယ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဒုတိယပိုင်း အစမှာပဲ တိုက်စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ မေဆွန် ဂရင််းဝုဒ် ကို လူစားလဲခဲ့ပြီး ပေါ့ဂ်ဘာ ကို ဝင်ရောက် ကစားစေခဲ့ပါတယ် ။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဖန်တီးမှုတွေ များစွာ ပြုလုပ်ဖို့ ၊ အဝေးကန်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ဘောလုံးပေးပို့မှု 12 ကြိမ်သာ မှန််ကန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးပေါက် ကန်သွင်းမှု ၊ ခြိမ််းခြောက်မှု ၊ အခွင့်အရေး ဖန်တီးမှု ၊ ဂိုးဖန်တီးမှု zero ဖြစ််ခဲ့တဲ့အပြင် 15 မိနစ်သာ ကစားခဲ့ရပြီး တိုက်ရိုက် အနီကဒ် နဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ် ။
ဖြစ်စဥ်ကတော့ ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ဘောလုံး လုယူဖို့ နာဘီကီတာဆီ ခြေစုံစလိုက်ပစ်ဝင်ထိုးခဲ့တဲ့အတွက် ကနဦး အဝါကဒ် ထိခဲ့ပြီး VAR နဲ့ ပြန်စစ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ တိုက်ရိုက််နီဖို့ အထိ ထိုက်တန်မှု ရှိနေခဲ့တဲ့အတွက် ကွင်းထဲက ထွက်ခွာခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီနောက် ပွဲစဥ်ဟာ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရပြီး ကစားသမား 10 ယောက်နဲ့ ယူနိုက်တက်တို့ဟာ အိမ်ကွင်း ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှောက်မှာ အရှက်တကွဲ ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့အတူ ယူနိုက်တက်တို့ အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့်7ထိ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါပြီ ။
အဆိုပါ ပွဲစဥ်အပြီးမှာတော့ သတင်းသုံးသပ်သူ အဖြစ် တာဝန်ယူနေခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ဂန္တဝင် ပေါလ် စခိုးလ် က ပေါ့ဂ်ဘာ အနေနဲ့ ရှေ့ဆက် အသင်းအတွက် မကစားသင့်တော့ဘူးလို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးနှက်ခဲ့လိုက်ပြီး ဆိုးလ်ရှားဖက်မှ ကာကွယ်စကား ဆိုခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
” စိတ်ပျက်ဖွယ်ညပဲလို့ ပြောရင် လျှော့ပြောရာကျနေပါလိမ့်မယ် ။ ဒါက ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံပြီးသားလို့ ထင်ပါတယ် ။ နည်းပြကတော့ ဗုဒ္ဓဟူနေ့တုန်းက comeback ပွဲစဥ်ရဲ့ ခံစားချက်တွေထဲ မျောပါသွားခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ် ”
” ကျွန်တော်တို့ ကောင်းမွန်စွာ ပွဲစဥ်တွေကို ကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မှတ်ခံခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ပြိုင်ဖက်ဟာ လီဗာပူး အသင်း ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့ အဲ့လို မကစားနိုင်ဘူးလေ ။ သူတို့ အသင်းမှာ အရည််အသွေးကောင်းတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ် ”
” ဒီပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ အားစိုက်ထုတ်မှု ကင်းမဲ့ခဲ့တယ်လို့ မပြောချင်ပါဘူး ။ လီဗာပူး အသင်းက ဒီလိုပွဲစဥ်မျိုး ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းစနစ်ပိုင်းအရ ကောင်းကောင်းပြင်ဆင််လာခဲ့ပါတယ် ။ ကံမကောင်းစွာပဲ အဲ့တာက လက်တွေ့မှာလည်း ဖြစ်ပွားသွားခဲ့ရပါတယ် ”
” ပေါ့ဂ်ဘာကတော့ ပထမပိုင်းအပြီး အသင်းကို ကူညီဖို့ ကွင်းထဲ ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ။ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ တာဝန်တွေ ပူးတွဲပါလာမှာပါပဲ ။ ဘောလုံးကိုင်ကစားဖို့ ၊ ကွင်းလယ်မှာ သူဘယ်လောက်သန်မာသလဲဆိုတာကို ပြသဖို့ ဂိုးရရှိစေဖို့ တာဝန်ယူခဲ့ရမှာပါ ”
” ဒါပေမဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ ဘောလုံး လုယူမှု တစ်ခုနဲ့ အတူ သူဟာ ကွင်းထဲက ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ် ။5–0နဲ့ ရှုံးနိမ့်နေခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်ကို ကစားသမား 10 ယောက်နဲ့ ချန်ထားရစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အကယ်လို့ အိုလီသာ မန်နေဂျာ အဖြစ် ဆက်ရှိသေးရင် နောက်ပွဲတွေ သူပါလောက်မယ်လို့ ခင်ဗျားထင်လား ? ”
” သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ထဲက ဖျက်လိုဖျက်စီးတွေ လုပ်နေခဲ့သူပါ ။ သူက ပါရမီကောင်းသူ တစ်ဦးဆိုတာကို လူတိုင်းသိကြပါတယ် ။ လူတိုင်း သူ့ကို ယုံကြည်ကြသလို မန်နေဂျာတိုင်းကလည်း ယုံကြည်ကြပါတယ် ။ လူတိုင်း သူ့ကို အခွင့်အရေး ပေးကြပြီး အရည်အသွေးတွေ ထုတ်ပြစေလိုခဲ့ကြပါတယ် ”
” ဒီလောက်ထိ ဖြစ်နေတာတောင် သူဟာ စာချုပ်အပေါ် လက်မှတ်မထိုးခဲ့သေးပါဘူး ။ အသင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားစေခဲ့ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ကွင်းထဲဝင်ရောက်ပြီး အခုလို အရာမျိုး ဖြစ်ပွားစေခဲ့ပြန်ပါတယ် ။ ဒါက အိုလီရဲ့ အမှားတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော့်ကို အထင်မလွဲလိုက်ပါနဲ့ ”
” သူဟာ ကစားခွင့်တော့ ထပ်ရကောင်း ရမှာပါ ။ ဟုတ်တယ်မလား ? ဒါပေမဲ့ သူ ကစားခွင့် မရလည်း လူတွေက လွမ်းဆွတ်နေကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ မထင်မိပါဘူး ။ သူဟာ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ရခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ဒါပေမဲ့ ခြေစွမ်း တည်ငြိမ်မှု မရှိဘူးလို့ ပြောနေဆဲပါပဲ ”
” ဒါပေမဲ့ အခု အဖြစ်အပျက်က စည်းကမ်းမရှိတာ ၊ မိမိရဲ့ မန်နေဂျာ ၊ အသင်းဖော်တွေအပေါ် လေးစားမှု မရှိခြင်း သပ်သပ်ပါပဲ ” လို့ ပေါလ် စခိုးလ် က ပေါ့ဂ်ဘာ အပေါ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ထိုးနှက် သွားခဲ့လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ကလပ် ရဲ့ နှစ် ၁၀၀ နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ အရှုံးမှတ်တမ်းဟောင်းကို လိုက်မီသွားခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ကိုးမန်း
Next Article လီဗာပူးကို ၅ ဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ဝန်ခံမှုတစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ရော်နယ်ဒို